‘Lasibatra manampy ireo lasibatra izahay’: Mandrakitra ireo fanitsakitsahana ny zon’olombelona ao Nikaragoà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 5:08 GMT
Pika tao amin'ny lahatsarin'ny #SOSNicaragua nozarain'ny gazety Nicaragua Press tao amin'ny fantsona YouTube.
Tao anatin'ny roa volana, hatramin'ny 18 avrily, nanao fihetsiketsehana [mg] anoherana ireo fepetra maro ankahalaim-bahoaka noraisin'ny governemanta ny Nikaragoàna, ary azo lazaina fa fihetsiketseham-bahoaka miorina amin'ny fifaharana am-pilaminana izy io. Nobodoina ny Oniversite, nosakanana ny lalambe, natao ny fitokonambe ary voahodidina barazy notefena haingana avy amin'ny mponina ny toerana manodidina isorohana ireo “parapolisy” pro-governemanta hiditra ao.
Araka ny nolazain'ny mpanao fihetsiketsehana, ny fivoarana haingana dia haingana tamin'ity hetsika avy eny ifotony ity dia nohafainganin'ny fahatafintohinana lalina tamin'ny famoretana mahery vaika nataon'ny governemanta tamin'ny fihetsiketsehana. Tamin'ny fotoana nanitsiana ity lahatsoratra ity, olona 178 no maty ary 1.400 no naratra.
Ny ankamaroan'ireo fahafatesana voamarina (mety mbola ho betsaka noho izany ny isa marina) dia avy amin'ny ratran'ny tifi-basy tamin'ny loha, tenda ary vatana. Niantso ireny fahafatesana ireny ho “famonoana ivelan'ny fitsarana” ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona tahaka ny Foibe misahana ny Zon'Olombelona Nikaragoana sy ny Amnesty International.
Nivoatra haingana ny toe-draharaha ary betsaka ny filazalazana mandeha an-tserasera. Avy amin'ny faritra maro manerana ny firenena, misy ny lahatsary sy tatitra nozaraina tamin'ny Facebook sy Twitter mampiseho vondrona mitam-piadiana mandrahona sy manafika mpanao fihetsiketsehana na ireo olona tsy manaiky ny hiasa miaraka amin'ireo.
Nandritra ny faran'ny herinandro, nodoran'ny vondron'olona mitam-piadiana velona tao amin'ny trano iray ny ankohonana iray ahitana zaza roa. Miraradraraka ny fanamelohana, saingy milaza ireo havana sy vavolombelona nanatrimaso fa ny vondrona parapolisy manana fifandraisana amin'ny governemantan'ny Filoha Daniel Ortega sy ny Filoha Lefitra Rosario Murillo no tompon'antoka tamin'izany.
Hanasa ireo fifandaminan'ny Zon'Olombelona hanao famotorana amin'ny herisetra i Nikaragoà (fifanarahana)
Fijery avy amin'ny mpiaro ny zon'olombelona: “Mivadika ambony ambany ny zava-drehetra”
Raha mifantoka any amin'izay mitranga eny an-dalambe sy ny fiezahana hisian'ny dini-pirenena mitodika mankany amin'ny fanovana ny governemanta ny vaovao, dia nifandray tamin'ireo vondrona mpikatroka miezaka miasa miaraka handrakitra ireo fampiangana fanitsakitsahana ny zon'olombelona mitranga ao amin'ny firenena, ao anatin'izao korontana izao, ny Global Voices.
Mba hahatakarana tsara kokoa ny asany sy ny halalina sy haben'ny fifanandrinana, niantsafa tamin'i “Marina” (novaina noho ny antony ara-piarovana ny anarany), izay feminista mpikatroka an-tserasera, mpahay lalàna sady manampahaizana manokana eo amin'ny lahy/vavy sy ny fampandrosoana, izahay.
Miasa miaraka amin'ny Foiben'ny Zon'Olombelona Nikaragoàna (CENIDH amin'ny teny espaniola) ao an-tanànan'i León izy. Fifandaminana iray mampiroborobo sy miaro ny zon'olombelona ny CENIDH. Natsangan'ny firaisamonim-pirenena Nikaragoàna tamin'ny taona 1990 izany, vanim-potoana efa taorian'ny ady izay nizoran'ny firenena tao amin'ny tetezamita mankany amin'ny governemanta demaokratika.
Tamin'ny fanombohan'ny krizy politika nanomboka tamin'ny 18 avrily 2018, sy ny fielezan'ny famoretana nanerana ny firenena, nifandray tamin'ny feminista toa an'i Marina tao León ny CENIDH handrakitra ireo fiampangana avy amin'ny olom-pirenena avy any amin'ny tapany andrefan'ny firenena.
Global Voices (GV): Tamin'ny fotoana manao ahoana no nanombohanareo handrakitra ny fiampangana fanitsakitsahana ny zon'olombelona tao León?
Marina: Tamin'izany fotoana izany, eo am-paharavana tanteraka ny andrim-panjakana mitandro ny filaminana sy ny rariny, ary ny fanjakan-dalàna amin'ny fotony indrindra. Misy tahotra sy horohoro manjaka amin'ny fiarahamonina. Mivadika ambony ambany ny zava-drehetra. Nandao ny adidiny hiaro ny vahoaka ny polisy nasionaly, fa namoritra sy namono olom-pirenena kosa. Manao fandidiam-paty ny Ivotoerana misahana izany ary mandiso ny tatitra ao anatiny. Manoka-teny ho amin'ny fiampangana olom-pirenena tsy manatsiny hanakonana ny heloka bevava ataon'ny polisy nasionaly ny Fampanoavana (ao amin'ny fitsarana).
Mbola tratran'ny fahirany ny lasibatra sy ny fianakaviany. Maro amin'izy ireo no terena hanaisotra ny fiampangany. Ary ho anay, mbola sarotra kokoa, satria tratran'ny fanenjehana sy ny fampitahorana ihany koa ny mpiaro ny zon'olombelona.
GV: Rehefa maharay fiampangana ianao, inona ny zotra arahinao ary ahoana ny itantanana ny vesatra?
Marina: Tsy manana birao izahay. Miasa avy ao an-tranonay izahay sy any amin'ny vondrom-piarahamonina hafa amin'ny tapany andrefana amin'ny firenena, any amin'ny toerana tahaka ny fiangonana, hopitaly, efitra malalaka amelan'ny fifandaminana anay hiasa, cafe, sns. Amin'ny tranga maro, sy tsy misy tahotra ho tratran'ny valifaty, mandefa ny rakitry ny fiampangan-dry zareo aminay ny tra-boina. [Amin'ireny raharaha ireny] tsy mandeha mitady azy ireny mivantana izahay. Avadikay an-tsoratra ny rakitra ary averinay any amin-dry zareo amin'ny alalan'ny imailaka ny dosien'ny raharaha hohamarinina na anampiana antsipiriany bebe kokoa.
Ny andry misahana ny zon'olombelona ihany no itokian'ny olom-pirenena. Ho anay, adidy amana andraikitra lehibe dia lehibe izany. Mino izahay fa amin'izao fotoana izao, aorian'ny Fiangonana Katolika, dia ny andry miaro sy mampiroborobo ny zon'olombelona no ananana fitokisana indrindra.
GV: Karazana fijoroana vavolombelona manao ahoana no angoninareo? Inona ireo fiampangana be mpanao indrindra ataon'ireo olona mifandray aminareo?
Marina: Ny fijoroana vavolombelona matotra indrindra dia ny tatitra famonoana noho ny fankahalàna sy ny herisetra ara-pananahana, ary ny fiampangana famonoana olona. Ny ankamaroan'izy ireo dia famelezana ara-batana, daroka ataon'ny polisy, trangan'ireo tanora voatifitra, famafana ny zo hanohitra, fandrahonana ho faty, fampitahorana, fanerena ireo mpiasam-bahoaka tonga aty aminay hanao fiampangana, fampijaliana… Tsy afaka miresaka tranga manokana izahay, fa tranga ankapobeny ihany, mba itazonana ny tsiambaratelo.
“Tsy mamaha ny ratram-po ny voambolam-pitsarana”
Mifandrohy akaiky amin'ny fanamelohana ny fanitsakitsahan-dalàna sy ny fanohanana ireo olona tratran'ny ratram-po ny asan'ireo mpiaro ny zon'olombelona. Mandritra izany fotoana izany, ilaina ny manangona fijoroana vavolombelona, manangona ny fiampangana ary manangana dosie — izaka saro-takarina avy lavitra sy fohy ezaka, saingy izay no fototry ny fampihavanana hoavy, amin'ny fananganana tsiaro sy famelomana indray ny andrim-panjakana.
Nanaiky hanasa ny fifandaminana mpiaro ny zon'olombelona [hanao famotorana] ny governemanta nikaragoàna
GV: Amin'izao fotoana izao, inona avy ny lalana ara-pitsarana azon'ny lasibatra izorana?
Marina: Manakaiky ny tsy misy ihany ny lalana ara-pitsarana. Ny asa fiampangana dia efa fihetsika saimbôlikan'ny fitsarana [rariny]. Izay no dingana voalohany hiatrehana ny ratram-po. Ary fantatsika fa tsy mamaha ratram-po ny fiteny ara-pitsarana.
Mihevitra izahay fa ny mahazavadehibe ny asanay dia mifototra amin'ny fananganana dosie. Amin'izao fotoana izao, kely dia kely ihany no azo novitaina. Nisy mpiara-miasa aamiko nilaza fa ny nofinofiny dia ny hanangananay ‘Lisitra nasionalin'ny lasibatry ny fampihorohoroam-panjakana’, toy ny vao nitsangana tany Goatemalà ahitana ny didim-pitsarana mana-tantaran'ny raharaha Molina Thiessen. Ohatra lehibe aty Amerika Afovoany, ao anatin'izao rivo-piovana izao, i Goatemalà amin'itony faritra itony.
Tianay ny hanampy amin'ny filazana ity tantara ity mba tsy hitranga intsony izany. Tsy mampino ny hoe vao 39 taona lasa izay amin'ny daty tahaka izao izahay no eo an-tampon'ny fandresena ny iray amin'ny didijadona nifandovan-taranaka naharitra indrindra hita teto amin'ny kaontinanta Amerikana.
GV: Inona ny dikan'ity asa ity ho anao? Ahoana ny itantananao azy ara-pihetseham-po ary inona no mandrisika anao?
Marina: Sarotra ny fijoroana vavolombelona. Mikarakara azy ireny izahay, mihaino azy ireny, ary mitsakotsako azy ireny. Izay ny zavatra kristiana indrindra nataoko tamin'ny fiainako: “tiavo tahaka ny tenanao ny eo akaikinao”. Asa mampidi-doza ity ity. Tsy manana ny fitaovana sy ny vola ampy hanaovana azy izahay. Ny mpiaro ny zon'olombelona no sisa farany mihaino ny vatantsika sy ny fahoriantsika. Misy ireo lasibatr'ity faritra ity amin'ny ambaratonga rehetra. Lasibatra manampy ireo lasibatra izahay.